Gaaritaanka inta lagu jiro Joogitaanka Guriga, Joogtada ah Caafimaadka - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Gaarsiinta intaad Joogtid Guriga, Ku dadaal Hindisaha Caafimaadka
Gaarsiinta intaad Joogtid Guriga, Ku dadaal Hindisaha Caafimaadka
In kasta oo wacyi-gelinta qofka iyo munaasabadaha lacag-ururintu ay xadidan yihiin inta lagu jiro Guriga Joogitaanka, Waxqabadyada Caafimaadka ee Joogtada ah, waxaa jira qaabab badan oo lagu sii wadi karo la-macaamilidda bulshadaada inta lagu jiro Bisha Wacyigelinta iyo Ka Hortagga Weerarka Galmada (SAAM) iyo wixii ka dambeeya! Hoos waxaa ku yaal liiska fikradaha iyo ilaha qaarkood.
· La xiriir hoggaamiyeyaasha caqiidada ku saleysan iyo kaniisadaha ku yaal bulshadaada si aad ugu dhiirrigeliso inay ku daraan farriinta Bisha Barashada Weerarka Galmada iyo Bisha Ka Hortagga ee isgaarsiinta xubnahooda.
· Ku xirnaaw barnaamijyo taageero siiya dadka waawayn xilliyadan adag, sida bixiyeyaasha adeegga caafimaadka maskaxda. U sii macluumaad ku saabsan sida cudurka faafa ee COVID-19 u saameyn ugu yeelan karo dhibbanayaasha / badbaadayaasha si kala duwan. Sidoo kale wax ka baro oggolaanshaha iyo sida ay ugu dari karaan oggolaanshaha shaqadooda.
· Ku daadiso xaashida iyo buug-yaraha guryaha dabaqyada ah iyo tas-hiilaadka nolosha ee la caawiyay.
· La xiriir idaacadda maxalliga ah si aad wareysi ula yeelato.
· Kordhi ciyaartaada warbaahinta bulshada! Ku dhaji baraha bulshada!
o Isticmaal Sawirada NSVRC, ama abuur mid kuu gaar ah.
o La wadaag sida dadku u awoodaan badbaadi badbaadayaasha.
o Marti gali tartan si aad ugu dhiirigeliso dadka inay wadaagaan qoraaladaada.
· Aqoonso dadka saamaynta ku leh bulshadaada ee ka dhex shaqeeya baraha bulshada, oo ha kula wadaagaan qalabka SAAM.
· Hayso macallin jimicsi maxalli ah oo martigeliya fasal jimicsi khadka tooska ah ah oo ku jira farriimaha oggolaanshaha, ama martigeli 5K muuqaal ah
· Ku xayeysiis noocyada internetka ee waraaqaha maxalliga ah.
· Weydiiso makhaayadaha maxalliga ah ee bixinaya wax soo saar inay ku daraan buug-yare yar oo leh dhammaan amarrada.
· Soo ogow haddii kooxaha madaniga ah ee maxalliga ah (sida Kiwanis, Libaaxyada, iyo Rotary) ay martigelinayaan shirarka khadka tooska ah, oo weydiiso inaad sameysid bandhig muuqaal ah.
· Wada-hawlgalayaasha bangiga cuntada ama goobaha qadada qadada si ay wax u baraan shaqaalahooda una siiyaan agab loo qaybiyo kaqeybgalayaasha.
· La xiriir macallimiinta bixiya koorsooyinka internetka oo ku deeqa si ay kuugu fududeeyaan manhajkaaga waxbarasho gebi ahaanba.
· Hayso tabaruceyaashu inay martigeliyaan munaasabadaha tooska ah ee Facebook halkaasoo ay uga hadlaan sababta ay ugu tabarucayaan hay'addaada.
· Marti gali is-dhexgal ah (gurigaaga joog) baaritaanka filimka.
Xaddidaadda dhacdooyinka qof-ahaaneed macnaheedu maahan inaadan sii wadi karin la xiriirka bulshadaada. Haddii aad hayso fikrado kale oo hal abuur leh, fadlan fariin ugu dir ocva@commerce.wa.gov oo waxaan ku dari karnaa fikradahaaga liiska!
Halkan guji si aad ugu noqotid Xafiiska U-doodista Dhibbanayaasha Dembiyada (OCVA) ee bogga hore
← Shaqeynta barnaamijka Grant ee Ganacsiga Yaryar wuxuu helayaa $ 5 milyan faleebo dheeri ah Ganacsiga wuxuu bixiyaa $ 9 milyan oo kiro iyo kaalmo tamar si loogu adeego qiyaastii 5,000 qoys oo dakhligoodu hooseeyo →